बङ्गलादेशमा नेपाली नाटक ‘देउकाशी’
मुख्य पृष्ठकला मनोरञ्जन समाचारबङ्गलादेशमा नेपाली नाटक ‘देउकाशी’
बंगलादेश २० पुस । बंङ्गलादेशको बरिसालमा भएको शब्दबोली नाट्य महोत्सवमा नेपाली नाटक ‘देउकाशी’ मञ्चन गरिएको छ । नाटक हेरेपछि आयोजक संस्था शब्दबोलीका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ बङ्गाली रङ्गकर्मी सोयव दुलालले भाषा नबुझिएपनि नाटकको प्रस्तुतीबाट भने धेरै कुरा बुझिएको बताए । उनले नेपाली कला र संस्कृतिको प्रशंसा समेत गरे ।
आदिइत्यादिका अन्तरर्राष्ट्रिय संयोजक प्रा. डा. अशोक थापाले देउकाशी गण्डक क्षेत्रको एउटा प्रतिनिधि पात्र भएको जानकारी दिए ।
नाटकले सांस्कृतिक मान्यता र सांस्कृतिक विचलनबीचको द्वन्द्वलाई कलात्मक किसिमले उठाएको छ । साथै अन्तरजातीय विवाहले निम्त्याएको सांस्कृतिक विचलन र त्यसको असरको मुद्दालाई नयाँ किसिमले उठान गरेको छ ।
आदिइत्यादिको प्रस्तुती रहेको नाटकको पुरु लम्सालको लेखन तथा निर्देशन, सुशीलसिंह ठकुरी, सरस्वती अधिकारी, रोशनी स्याङ्बो आइपी आचार्य र अशोक थापाको अभिनय रहेको छ । नाटकमा दिवाकर घिमिरेको प्रकाश परिकल्पना र परिचालन रहेको छ ।